Bit By Bit - Hordhac - 1.4 Dulucda kitaabkan
Laba mawduuc ee buuggu waa 1) isku darka diyaarinta iyo xannaaneynta iyo 2) anshaxa.
Laba mawduuc ayaa ku dhex jira buuggan oo dhan, waxaana jeclaan lahaa in aan hadda si cad u muujiyo si aad u aragto iyaga markay soo noqdaan marar badan. Marka hore waxaa lagu muujin karaa isbarbardhig labadaba: Marcel Duchamp iyo Michelangelo. Duchamp waxaa ugu fiican ee loo yaqaan 'readymade', sida Fountain , halkaas oo uu ku soo qaatay walxaha caadiga ah iyo dib u soo celiyay farshaxanka. Michelangelo, oo dhinaca kale ah, dib uma soo celin. Markuu doonayay inuu abuuro sawirkii Daa'uud, ma uu raadin gabal marmar ah nooca David sida: wuxuu ku qaatay seddex sano oo u shaqeynayay inuu abuuro sheekadiisa. David ma aha wax diyaar ah; waa miisaaniyad (shaxda 1.2).
Jaantuska 1.2: Muuqaalka Marcel Duchamp iyo David by Michaelangelo. Fountain waa tusaale tusaale ah oo diyaar ah, halkaas oo farshaxan uu arko wax horayba u jirey adduunka markaas ka dib wax soo saara farshaxanka. David waa tusaalayaal farshaxan oo si ula kac ah loo abuuray; waa xannaaneyn. Cilmi-baarista bulshada ee da'da dijitaalka ah ayaa ku lug leh diyaar-garowga iyo xannaaneynta. Sawirka Faransiiska by Alfred Stiglitz, 1917 (Waxaa laga soo xigtey: The Blind Man , no.2 / Wikimedia Commons ). Sawirada David Jörg Bittner Unna, 2008 (Waxaa laga soo xigtey: _Galleria dell'Accademia, Florence / Wikimedia Commons ).
Labadan nooc ee diyaaradaha ah iyo kuwa xannaaneynaya-waxay ku dhow yihiin khariidado noocyo kala duwan oo loo adeegsan karo cilmi baarista bulshada ee da'da digital-ka ah. Sida aad arki doonto, qaar ka mid ah tusaalooyinka ku jira buuggan waxaa ku jira khibrad xariif ah oo ah ilaha xogta waaweyn ee asal ahaan abuuray shirkado iyo dawlado. Tusaalayaal kale, si kastaba ha ahaatee, cilmi-baaruhu wuxuu bilaabay su'aal gaar ah kadibna wuxuu isticmaalay qalabka da'da dijitalka si loo abuuro xogta loo baahan yahay si looga jawaabo su'aashaas. Marka si fiican loo sameeyo, labadaba labadooduba waxay noqon karaan kuwo aad u awood badan. Sidaa daraadeed, cilmi baaris bulsheed ee da 'da'da ah ayaa ku lug leh diyaaradaha iyo xayiraadda labadaba; waxay ku lug yeelanaysaa Duchamps iyo Michelangelos labadaba.
Haddii aad sida caadiga ah isticmaasho xogta diyaarinta ah, waxaan rajeynayaa in buugani uu ku tusi doono qiimaha xogta xannaaneynta. Sidoo kale, haddii aad guud ahaan isticmaasho xogta xannaanaynta, waxaan rajeynayaa in buugani inuu ku tusi doono qiimaha xogta diyaarinta. Ugu dambeyntiina, iyo ugu muhiimsan, waxaan rajeynayaa in buuggani uu ku tusi doono qiimaha isku dhafan labadan nooc. Tusaale ahaan, Joshua Blumenstock iyo asxaabtu waxay qayb ka ahaayeen Duchamp iyo qayb Michelangelo ah; waxay dib u soo celiyeen diiwaanka call-ka (diyaar-garow) waxayna sameeyeen xog-ururin xogeedkooda (xannaaneyn). Isku daridda diyaarinta iyo xannaaneyntu waa qaab aad ku arki karto gebi ahaanba buugan; waxay u egtahay in ay u baahan tahay fikrado ka soo jeeda sayniska iyo cilmiga sayniska labadaba, waxayna badanaa keenaysaa baaritaanka ugu xiisaha badan.
Mawduuc labaad oo ku socda buuggan waa anshax. Waxaan ku tusi doonaa sida cilmi-baarayaashu u isticmaali karaan kartida da'da dhijitaalka ah si ay u sameeyaan cilmi-baaris xiiso leh oo muhiim ah. Oo waxaan idin tusi doonaa sida cilmi-baarayaasha ka faa'iideysanaya fursadahaasi ay ka hor imaanayaan go'aannada anshaxa adag. Cutubka 6aad ayaa si buuxda loogu hirgelin doonaa anshaxa, laakiin aniguba waxaan isku xirayaa anshaxa cutubyada kale iyo sababta oo ah, da'da dijitaalka ah, anshaxu wuxuu noqonayaa qayb ka mid ah qaybaha sii kordhaya ee naqshadeynta cilmi-baarista.
Shaqada Blumenstock iyo asxaabtu waxay mar labaad muujinayaan. Lahaanshaha helitaanka diiwaanka telefoonka ee qiyaasta 1.5 milyan oo qof ayaa abuuraya fursado cajiib ah oo cilmi baaris ah, laakiin sidoo kale waxay abuureysaa fursado waxyeelo leh. Tusaale ahaan, Jonathan Mayer iyo asxaabtiisu (2016) waxay muujiyeen in xitaa "diiwangelinta" diiwaanka telefoonka (sida, xogta aan lahayn magacyada iyo cinwaanada) waxaa lagu dari karaa macluumaadka dadweynaha ee la heli karo si loo aqoonsado dad gaar ah ee xogta iyo in la fahmo macluumaadka xasaasiga ah ee ku saabsan iyaga, sida macluumaadka caafimaadka qaarkood. Si aad u cadeeysid, Blumenstock iyo asxaabtu iskuma dayin inay wax ka qabtaan macluumaadka xasaasiga ah ee ku saabsan qof kasta, laakiin suurtogalnimada macnaheedu waxa weeye inay adagtahay in la helo xogta wicitaanada waxayna ku qasbeen inay qaataan ilaalin ballaaran inta ay samaynayaan cilmi-baaristooda.
Marka laga tago faahfaahinta diiwaanka telefoonka, waxaa jira dareenka aasaasiga ah ee ka dhex socda cilmi-baaris bulsheed oo badan oo da 'da ah. Cilmi-baadhayaasha-inta badan ee la shaqeeya shirkadaha iyo dawladaha-waxay leeyihiin awood korodh u leh nolosha ka qaybgalayaasha. Awoodda, waxaan ula jeedaa awoodda aan wax ugu qaban karo dadka aan lahayn ogolaansho ama xitaa wacyiga. Tusaale ahaan, cilmi baarayaashu hadda waxay ilaalin karaan dabeecada malaayiin qof, iyo sidii aan ku sharxi lahaa mar dambe, cilmi-baarayaashu waxay sidoo kale diiwaangelin karaan malaayiin qof oo ku jira tijaabooyin waaweyn. Intaa waxaa dheer, dhammaan arrimahan ayaa dhici kara iyada oo aan la helin oggolaansho ama wacyi-galin dadka ku hawlan. Iyada oo awoodda cilmi-baarayaashu ay sii kordhayso, ma jirin wax isbeddello u dhigma oo ku saabsan sida awoodda loo isticmaalo. Dhab ahaan, cilmi-baarayaashu waa inay go'aamiyaan sida loo isticmaalo awooda awoodooda iyada oo ku saleysan xeerarka aan sharciga waafaqsaneyn, sharciyada, iyo caadooyinka. Isku dhafan awoodaha awoodda leh iyo tilmaamaha aan caddayntu waxay xoojin karaan xitaa cilmi baarayaasha si macquul ah u xallilaya go'aamada adag.
Haddii aad guud ahaan diirada saareyso sida cilmi-baarista bulshada ee da '-da oo abuuraya fursado cusub, waxaan rajeynayaa in buugani uu ku tusi doono in fursadahaasi ay sidoo kale abuuri karaan khataro cusub. Sidoo kale, haddii aad guud ahaan diirada saarto khatartaas, waxaan rajeynayaa in buuggani kaa caawin doono inaad aragto fursadaha fursadaha u baahan kara khataraha qaarkood. Ugu dambeyntiina, ugu muhiimsan, waxaan rajeynayaa in buuggan uu qof walba ka caawin doono inuu si masuuliyad leh u dheelo khatarta iyo fursadaha ay samaysay cilmi baaris bulsheed oo dhijitaal ah. Marka korodhka awoodda, waa in sidoo kale la kordhiyaa mas'uuliyadda.